Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.3 Wadarta qaab qalad sahan
Total khaladaad sahan baadi = wakiil + khaladaad cabbir.
Qiyaasaha ka yimaada sahanada tijaabada waxay inta badan yihiin kuwa aan dhammaystirnayn. Taasi waa, inta badan waxaa jira farqi u dhexeeya qiyaasta ay samaysay sahan tijaabo ah (tusaale ahaan, qiyaasta celceliska ardayda ee dugsiga) iyo qiimaha runta ah ee dadweynaha (tusaale ahaan, dhererka caadiga ah ee ardayda dugsiga). Mararka qaarkood qaladaadkaasi waa mid aad u yar oo aan muhiim ahayn, laakiin mararka qaarkood, nasiib daro, waxay noqon karaan kuwo waaweyn oo macquul ah. Daraasad lagu fahmayo, lagu cabbiro, iyo lagu yareeyo khaladaadka, cilmi-baarayaasha ayaa si tartiib tartiib ah u abuuray habdhaqan fikradeed oo qeexaya khaladaadka ka soo bixi kara baadhitaano muunad ah: wadarta guud ee qaladka sahanka (Groves and Lyberg 2010) . Inkasta oo horumarinta qaab-dhismeedkan ay bilawday 1940-yadii, waxaan u maleynayaa in ay na siiso laba fikrado wax ku ool ah oo loogu talagalay baaritaanka sahanka ee da'da digital.
Ugu horreyntii, wadarta qaldan ee wadaxaajoodka ayaa caddaynaysa inay jiraan laba nooc oo khaladaad ah: khiyaamo iyo kala duwanaansho . Qiyaas ahaan, khiyaamadu waa qalad nidaamsan iyo isbeddel waa khalad iska cad. Si kale haddii loo dhigo, waxaad qiyaasi kartaa kormeerka 1,000 oo isku mid ah sahan tijaabo ah isla markaasna eegaya qaybinta qiyaasaha laga soo bilaabo 1,000 noocyadaas. Falanqeyntu waa farqiga u dhexeeya celceliska qiyaasaha soo-saarka iyo qiimaha runta ah. Isbedelku waa isbedelka qiyaasahan. Dhamaan kuwa kale ee isku midka ah, waxaan jeclaan lahayn nidaam aan lahayn khiyaamo iyo kala duwanaansho yar. Nasiib darro, dhibaatooyin badan oo dhab ah, sida loola dhaqmo, noocyo kala duwan oo aan kala sooc lahayn ma jiraan, taas oo cilmi-baarayaasha ku adkaynaysa xaalada adag ee go'aan ka gaadhaysa sida loo dheelitirayo dhibaatooyinka ay keeneen khiyaamo iyo kala-duwanaansho. Qaar ka mid ah cilmi-baarayaasha ayaa raba inay door bidaan nidaamyo nadaafadeed, laakiin diiradda kaliya ee maskaxda lagu hayo waxay noqon kartaa qalad. Haddii ujeedadu tahay in la soo saaro qiyaasta sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee runta ah (ie, qaladka ugu yar ee suurtogalka ah), markaa waxaad ka fiicnaan kartaa nidaam leh khiyaamo yar iyo kala duwanaansho yar marka loo eego midka Nasiib darro laakiin waxay leedahay kala duwanaansho weyn (Jaantus 3.1). Si kale haddii loo dhigo, wadarta guud ee khaladaadka sahan ee sahanka ayaa muujinaya in marka qiimaynta habraacyada baaritaanka ra'yiga, waa inaad tixgelisaa labadaba khiyaamo iyo kala duwanaansho.
Jaantus 3.1: Muuqaal iyo isbeddel. Fikrad ahaan, cilmi-baarayaashu waxay yeelan doonaan hab-raalli ah, nidaam qiyaas ah oo hooseeya. Dhab ahaantii, waxay inta badan leeyihiin inay sameeyaan go'aano abuuraya ganacsi u dhexeeya indho-la'aan iyo kala-duwanaansho. Inkasta oo cilmi-baarayaasha qaarkood ay doorbidaan nidaamyo aan xaq ahayn, mararka qaarkood hab-raac yar, hab-kala-duwanaansho yar-yar ayaa soo saari kara qiyaaso sax ah marka loo eego habraac toos ah oo leh kala duwanaansho sare.
Fikradda labaad ee guud ee wadarta qaldan ee sahanka, kaas oo abaabulaya inta badan cutubkan, waa in ay jiraan laba ilo khaladaad ah: dhibaatooyinka la xiriira cidda aad la hadleyso ( matalaadda ) iyo dhibaatooyinka la xiriira waxa aad ka baratay sheekooyinka ( cabbiraadda ). Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso qiyaasida dabeecadaha internetka ee qarsoodiga ah ee dadka waaweyn ee ku nool Faransiiska. Samaynta qiyaasahaas waxay u baahan tahay labo nooc oo kala duwan. Ugu horreyn, jawaabaha jawaabeyaashu ay bixiyaan, waa inaad ka fekertaa dabeecadahooda ku saabsan asturnaanta internetka (taas oo ah dhibaatada cabiraadda). Marka labaad, laga soo qaado dabeecadaha la is waydaarsan yahay ee jawaabeyaashu, waa inaad ka fekertaa dabeecadaha dadweynaha guud ahaan (taas oo ah dhibaatada matalaadda). Su'aalaha ku salaysan baaritaanka xun ee shaandhayntu waxay soo saari doonaan qiyaaso xun, maadaama ay si xun u tirin doonaan su'aalaha sahan oo sahlan. Si kale haddii loo dhigo, qiyaasaha wanaagsani waxay ubaahanyihiin habab toosan oo lagu cabbiro iyo matalaad. Marka la eego asalka, waxaan dib u eegi doonaa sida cilmi-baarayaasha sahanku ay uga fekereen matalaadda iyo cabbiridda hore. Ka dib, waxaan soo bandhigi doonaa sida fikradaha ku saabsan matalaadda iyo cabbiraadda ay ku hagaajin karto cilmi baarista sahanka digital-ka ah.